‘Ole Out', Jamaahiirta Man United Oo Sababtan Awgeed U Dalbaday In Shaqada Laga Caydhiyo Ole Gunnar Solskjaer. - Gool24.Net
Tababaraha Man United ee Ole Gunnar Solskjaer ayaa la kulmay cadhada taageerayaasha kooxdiisa United.
Waxaa soo baxay war sheegaya in Ole Gunnar Solskjaer uu damacsan yahay in uu Ashley Young ka dhigto kabtanka rasmiga ah ee kooxdiisa United.
Laakiin markii uu soo baxay in Ashley Young uu noqon karo kabtanka rasmiga ah ee Man United waxay taageerayaasha United bilaabeen olole ah “Ole Out” oo la micno ah in Ole Gunnar Solskjaer shaqada laga caydhiyo.
Kulamadii ugu danbeeyay xili ciyaareedkan waxa uu Ashley Young ka mid ahaa ciyaartoydii cadaawada ugu badan ee taageerayaasha Man United la kulmay.
Intii lagu jiray kulamadii siddeed dhamaadkii Champions league waxa uu Ole Gunnar Solskjaer eedayn badan kula kulmay in uu Ashley Young soo safay kulamadii Barcelona kuwaas oo uu qaladaad badan sameeyay.
Laakiin markii uu soo baxay warka ah in Solskjaer uu qorshaynayo in uu calaamada kabtanimada Man United si dhab ah ugu gacan galiyo Young waxay taasi keentay falcelin aan fiicnayn.
Solskjaer ayaa ku qasban in uu helo badalka tooska ah ee kabtanka Old Trafford ka baxaya ee Antonio Valencia waxaana jira warar kale oo sheegaya in Pual Pogba uu noqon doono kabtanka cusub balse waxaa barbar socda Ashley Young.
Taageere Man United ah oo warka Ashley Young ka cadhaysan ayaa soo qoray: “Ashley Young oo kabtan ah? ayaa isku taagi kara aragtida magaca ninkan oo ugu horeeya xaashiada kooxda? Haddii waxa ay Man United xagaagan qaban karto oo dhami uu yahay in isaga xor lagu sii daayo, kadib waxaynu haysan doonaa suuqa kala iibsi oo fiican”.
Taageere kale ayaa isna soo qoray: ” Sidaa daraadeed, Ashley Young waxa uu 2019 noqon doonaa kabtanka Manchester United?? Ceeb waynaa”.
Taageere kale oo isla arintan ka hadlaya ayaa soo qoray: ‘ Waxaan rajaynayaa in wararka xanta ah ee ugu danbeeyay ee in Ashley Young uu doonayo in uu kabtan buuxa noqdaa ay kaftan tahay, haddii kale oo ayna ahayn, boqolkiiba boqol Ole Out”.
Jamaahiirta Man United ayaa markii uu Solskjaer shaxdiisii Camp Nou ee kulankii Barcelona uu Ashley Young ku soo bilaabay waxay intii ayna ciyaartu bilaamin sheegeen in ay ku ciyaarayaan 10 ciyaartoy maadaama oo ay Young u arkayeen mid aan u tirsanayn.
Laakiin markii uu soo baxay warka sheegaya in Solskjaer uu kabtan rasmi ah ka dhigan karo Young waxay keentay duufaan diidmo ah oo kaga timid taageerayaasha kooxdiisa United.